ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း ~ SAI SENG SERK
Home » HEALTH » ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း
မိတ်ဆွေတယောက်ထံက အီမေးထဲမှာ ပါလာတာပါ။ မူလရေးသူ ဘယ်သူလဲ သေသေချာချာ မသိပေမဲ့ ဝက်ဆုိုဒ်တခုက ရတယ်လုို့ ယူဆရပါတယ်။ သူများဆီက ရတာဆုိုပေမဲ့ အကြောင်းအရာလေးက ကောင်းလွန်းလုို့ ပြန်ဝေငှလုိုက်တာပါ။
ဆေးသွင်းကုသခြင်း ( CHEMOTHERAPY ) ဟာ ကင်ဆာေ၇ာဂါ ပျောက်ကင်းအောင်ပြုလုပ်၇ာမှာ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်တယ် လို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြောကြားလာခဲ့ရာက အခုနောက်ဆုံး မှာတော့ တခြားနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းရှိတယ် လို့ ဂျွန်ဟော့(ပ်) ကင်း(စ်) ကပြောကြားလာပါပြီ ။
ဂျွန်ဟော့(ပ်)ကင်း(စ်)မှကင်ဆာရောဂါနှင့် ပက်သက်သော နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်။
၁။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကင်ဆာဆဲ၉လ်)တွေရှိတယ်။ဒီကင်ဆာဆဲ(လ်)တွေဟာ သန်းထောင်ပေါင်းအနည်းငယ်ထိ
ပွားများမလာမချင်းတော့ ပုံမှန်ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးချက်မှာ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
လူတွေရဲ့ကိုယ်ထဲက ကင်ဆာဆဲ(လ်)တွေဟာ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်တဲ့အရေအတွက်အထိ မရောက်ရှိသေးဘူးလို့သာ
၃။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရောဂါပြီးစနစ် အားကောင်းနေရင် ကင်ဆာဆဲ(လ်)တွေဟာ ဖျက်ဆီးခံရပြီး
၄။ လူတစ်ယောက်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင် သူဟာအဟာရအတော်များများချိုတဲ့နေပြီဆိုတာကိုပြသတာပါဘဲ၊
ဒါဟာမျိုးရိုး၊ပတ်ဝန်းကျင်၊အစားအစာနဲ့ လူနေမှုပုံစံစတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၅။ ဒီလိုအဟာရမျိုးစတဲ့ချို့ တဲ့နေတာကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဆိုရင်စားသောက်ပုံစံကိုပြောင်းလဲပြီး ဖြည့်စွက်အစားအစာတွေ စားပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါပြီးစနစ်ကို အားကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
၆။ ဆေးသွင်းကုသခြင်းဟာ အပွားမြန်တဲ့ကင်ဆာဆဲ(လ်)တွေကို အဆိပ်သင့်စေသလို ရိုးတွင်းခြင်ဆီ၊
အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းစသည်တို့ မှာရှိတဲ့ အပွားမြန်တဲ့ဆဲ(လ်)ကောင်းတွေကိုပါ ပျက်စီးစေပြီး အသည်း၊ကျောက်ကပ်၊
အဆုတ်စတဲ့ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
၇။ ဓါတ်ရောင်ခြည်နဲ့ကုသခြင်း (ဓါတ်ကင်ခြင်း)ဟာ ကင်ဆာဆဲ(လ်)တွေကို ပျက်စီးစေသလို ကောင်းတဲ့ဆဲ(လ်)တွေ
တစ်သျှုးတွေ၊ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။
၈။ ဓါတ်ရောင်ခြည်(သို့)ဆေးသွင်းကုသတဲ့အခါ အစပိုင်းမှာတော့ အများအားဖြင့ အကျိတ်တွေ ကျုံ့ သွားတတ်ပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် ရေရှည်ကုသတဲ့အခါ ထိရောက်မှုကျဆင်းသွားပါတယ်၊အကျိတ်တွေနောက်ထပ် မကြေပျက်တော့ပါဘူး။
၉။ ဆေးသွင်းကုသခြင်းနဲ့ ဓါတ်ကင်ခြင်းတို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အဆိပ်အတောက်တွေများလာတဲ့အခါ ရောဂါပြီး
စနစ်ဟာ အားလျော့တာတွေ၊ပျက်စီးတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ လူနာဟာ ရောဂါပိုး အမျိုးမျိုးကြောင့်
ဖြစ်စေ နောက်စပ်တွဲအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ ဆေးသွင်းကုသခြင်းနဲ့ ဓါတ်ကင်ခြင်းဟာ ကင်ဆာဆဲ(လ်)တွေကို ဗီဇပြောင်းစေနိုင်ပြီး ဖျက်ဆီးရခက်စေနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်ဖို့ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ သူတို့မျိုးပွားရာမှာလိုအပ်တဲ့ အဟာရတွေကိုဖြတ်
(က) သကြား။ ။သကြားဟာကင်ဆာရဲ့ အဟာရတစ်ခုပါဘဲ။သကြားကိုဖျက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကင်ဆာဆဲ(လ်) တွေရဲ အဓိကအဟာရ တစ်ခုကို ဖြတ်လိုက်သလိုပါဘဲ။ Nutra Sweet,Equal,Spoonful စတဲ့ သကြားအစားထိုးပစ္စည်းတွေဟာ Aspartame ဆိုတဲံအရာပါဝင်တဲ့အတွက် လူကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအစားအစာဖြစ်တဲ့ ပျားရည် ဒါမှမဟုတ် တင်လဲရည်နည်းနည်းလေးက ပိုကောင်းပါတယ်။စားပွဲတင်ဆားဟာ ဓာတုပစ္စည်းရောထားတဲ့အတွက်ဖြူဖွေးနေတာပါ၊ပင်လယ် နေလှမ်းဆားကပိုကောင်းပါတယ်။
(ခ) နို့ ။ ။နို့ဟာခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိအချွဲတွေထွက်စေပါတယ်၊အထူးသဖြင်အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှာပါ အကျိအချွဲတွေ ကို ကင်ဆာဆဲ(လ်) တွေကစားသုံးနိုင်ပါတယ်။နို့အစားသကြားမပါတဲ့ပဲနို့သောက်ရင် ကင်ဆာဆဲ(လ်တွေကစားသုံးပါတယ် ။နို့အစားသကြာမပါတဲ့ ပဲနို့သောက်ရင် ကင်ဆာဆဲ(လ်)တွေကိုအစာပြတ်စေနိုင်ပါတယ်။
(ဂ) ကင်ဆာဆဲ(လ်)တွေဟာအက်ဆစ်(အချဉ်)၊ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပိုပွားနိုင်ပါတယ်။ အသားအခြေခံတဲ့ အစားအစာဟာ အက်ဆစ်ဓာတ် ကိုအားပေးတယ်။အမဲသား၊၀က်သားထက် ငါးစားတာအကာင်းဆုံးပါဘဲ။ ဒါမှမဟုတ်ကြက်သားနည်း နည်းစားနိုင်ပါတယ်။ အသားတွေမှာမွေးမြူရေးကသုံးတဲ့ပဠိဇေ၀ဆေးတွေ၊ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေနဲ့ကပ်ပါးပိုးတွေပါလာတတ်ပါတယ်၊ဒါတွေဟာလူတွေအထူးသဖြင့် ကင်ဆာရောဂါသည်တွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
(ဃ)လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သူတို့ ရဲ့အရည်။ ဖြူအောင်မဖွတ်ရသေးတဲ့အစေ့ ။အဆန်။အနှံ နဲ့ သစ်သီးအနည်းငယ်ကိုအစား အစာရဲ့ ၈၀% အချိုးနဲ့စားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကို အယ်(လ်)ကာလိုင်း(ALKaLine) အခြေအနေရောက်စေနိုင် တယ်။ကျန်၂၀% ကိုတော့ ပဲအပါအ၀င် ပြုတ်ထားတဲ့အစားအစာတွေအဖြစ် စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရည်ထဲမှာ စွမ်းအားမြင့်အင်ဆိုင်း တွေပါဝင်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကအလွယ်တကူ စုပ်ယူနိုင်ပြီး ၁၅မိနစ်အတွင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များ ဆီရောက်နိုင်တယ်။ ဆဲ လ်တွေကို အဟာရပြည့်စေပြီး ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ် တွေအဖြစ် ဖွံဖြိုးဖို့အားပေးတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ် တွေတည်ဆောက်ဖို့ စွမ်းအားမြင့် အင်ဆိုင်းတွေ ရရှိအောင် လတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရည်နဲ မချက်ရသေးတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို တနေံနှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက် စားသောက်သင့်တယ်။ အပူချိန်104’F (40’c) ဆိုရင်အင်ဆိုင်းတွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။
(င) ကဖိန်း ( Caffeine ) တွေအများကြီးပါတဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နဲ့ ချောကလက်တွေကို ရှောင်ပါ။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း (Green Tea ) ဆိုပိုကောင်းတယ်။ ကင်ဆာကိုခုခံတဲ့သတ္တိလည်းရှိတယ်။ ရေဆိုရင်သောက်ရည်သန့် ဒါမှမဟုတ် သေချာစွာစစ်ထားတဲ့ရေဟာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ ဘိုပိုင်ရေမှာက သတ္တုအလေးစား (Ileavy Metals ) တွေ၊ အဆိပ်အတောက်တွေပါလာတတ်တယ်။ ပေါင်းခံရည်ကျတော့အက်ဆစ်ဖြစ်စေတယ်။ ရှောင်ပါ။
၁၂ ။ အသားမှာ ပရိုတိန်းတွေဟာ အစာကြေဖို့ ခက်ခဲပြီး အစာခြေအင်ဆိုင်းတွေ အများကြီးလိုအပ်တယ်။ အစာမကြေဘဲ လူတွေဆီရောက်လာတဲ့ အသားတွေဟာ ပုတ်သွားပြီးအဆိပ်အတောက်တွေပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
၁၃ ။ ကင်ဆာဆဲ(လ်) တွေမှာခိုင်ခံ့တဲ့အပေါ်ယံ ပရိုတိန်းအလွှာရှိတယ်။ အသားကို လျှော့စားရင်ဖြစ်စေ၊ အသားမစား ဘဲနေရင်ဖြစ် ကင်ဆာဆဲ(လ်) ရဲ့ ပရိုတိန်းနံရံတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အင်ဇိုင်းတွေပိုမိုလာတဲ့ အတွက် ခန္ဒာ ကိုယ်ရဲ့ သုတ်သင်ရေးဆဲ(လ်) (Killer
Cells ) တွေဟာ ကင်ဆာဆဲ(လ်) တွေကို သုတ်သင်ဖို့ပိုလွယ်သွားပါတယ် ။ ၁၄ ။ ဖြည့်စွက်အစားအစာဖြစ်တဲ့ ဓာတ်တိုးဟန့် တားပစ္စည်း ( Antioxidants ) ဗီတာမင်သတ္တုဓာတ် ( Minerals ) IP6, Flor – ssence, Essiac, EFAS စသည့်တို့ဟာ ခန္ဒာကိုယ်ရဲ့ ရောဂါပြီး စနစ်ကို မြင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး သုတ်သင်ရေး ဆဲ(လ်)တွေအားသုတ်သင်စေနိုင်တယ်။ အခြားဖြည့်စွက်အစားအစာဖြစ်တဲ့ ဗတာမင် ( E )
ဟာလည်း ခန္ဒာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ဆဲ(လ်) တွေ ၊ မလိုချင်တဲ့ဆဲ(လ်) တွေ ၊ထိခိုက်ခံထားရတဲ့ဆဲ(လ်) တွေကို ရှင်းလင်းပစ်ရာမှာ
၁၅ ။ ကင်ဆာရောဂါဟာ ကိုယ်ရယ် ၊ စိတ်ရယ် ၊ အတွေးအမြင်ရယ် ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။
၁၆ ။ ကင်ဆာဆဲ(လ်) တွေဟာ အောက်ဆိဂျင်များပြားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မပွားများနိုင်ပါဘူး ။နေ့စဉ်ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း အသက်ပြင်းပြင်းရှုရှိုက်ခြင်းဟာ ကိုယ်တွင်းရှိဆဲ(လ်) တွေ အထိ အောက်ဆီဂျင်များများရောက် စေနိုင်တယ်။ အောက်ဆီဂျင် ကုထုံး ( Oxygen Therapy ) ဟာကင်ဆာဆဲ(လ်) တွေကို ချေဖျက်နိုင်တဲ့ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတခုပါဘဲ ။
(၂) ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ပလပ်စတစ်ရေဗူးတွေ မထည့်ရန်။
ဒီအကြောင်းတွေကို မကြာသေးခင်ကဘဲ ဂျွန်ဟော့ (ပ်) ကင်း(စ်) က သတင်းလွှာမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကို ဝေါ်(လ်) တာ ရိ (ဒ်) တပ်မတော်ဆေးဗဟိုဌာန ( Walter Reed Army Medical Center ) မှာလည်း ဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ ဒိုင်အောက်ဆင်း ( Dioxin )ဓာတုပစ္စည်းဟာကင်ဆာ ၊ အထူးသဖြင့် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒိုင် အောက်ဆင်းဟာ ကျွန်တော် တို့ ခန္ဒာကိုယ်ထဲက ဆဲ(လ်) တွေအတွက် အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်တောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပလပ်စတစ်ဗူးတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ မထားပါနဲ့ ။ ဒိုင်အောက်ဆင်းတွေထွက်လာမှာမို့ပါ ။ ဒီကျန်းမာရေးပြသနာကိုမကြာသေးခင်ကပဲ ဒေါက်တာ အက်(ဒ်)၀ပ်(ဒ်) ဖူဂျီမိုကို ( Dr. Edward Fujumoto ) ဟာ ရုပ်သံအစီးအစဉ်ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ Castle ဆေးရုံက Wellness Program
ဆိုတဲ့ ကျန်းမားရေးအစီအစဉ်းရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဒိုင်အောက်ဆင်းရဲ့ဆိုကျိုးတွေ ကို တင်ပြဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ပလက်စတစ်ဗူးတွေထဲ အစားအစာထည့်ပြီး မိုက်ကရိုဝေ့(ဖ်) မီးဖိုမှာ အပူမပေးသင့်ပါဘူးလို့ သူကပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဆီပါတဲ့ အစားအစာတွေပေါ့။ ပလပ်စတစ်ရယ် ၊အဆီရယ် ၊ အပူချိန်မြင်မြင့်ရယ်ပေါင်းစပ်လိုက်ရငါ ဒိုင်အောက်ဆင်းတွေထွက်လာပြီး အစားအစာ ထဲရောက်ရှိသွားကာ နောက်ဆုံးမှာခန္ဒာကိုယ်က ဆဲ(လ်) တွေထဲ ရောက်သွားပါတော့တယ်။ ပလပ်စတစ်အစား ဖန်ထည် ၊ ကြွေထည် စတာတွေ ( Glass, Corning Ware, Pyrex, Ceramic ……….) ကိုသူကသုံးခိုင်းပါတယ် ။ ဒိုင်အောက်ဆင်း မထွက်တော့ပါ ဘူး ။ ဒါကြောင့်အသင့်စားသုံနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကို နွေးတဲ့ အခါ မူလဗူးခွက်တွေကိုမသုံသင့်ပါဘူး။ စက္ကူကိုသုံးရင်လည်းမဆိုးဘူး ။ ဒါပေမယ်ံ စက္ကထဲမှာဘာပါသလဲဆိုတာ မသိရဘူး။ ဖန်ထည် ၊ ကြွေထည်သုံးတာဘဲပိုဘေးကင်းပါတယ် ။
အသင့်စားသုံးနိုင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် အတော်များများဟာ ဖော့ဗူးအစားစက္ကူတွေကို သုံးလာကြပါပြီ။ အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ခု ကတော့ ဒိုင်အောက်ဆင်းပါဘဲလို့ သူကပြောပါတယ် အစားအစာတွေကို ပလပ်စတစ်ပါးပါးနဲ့ ထုပ်ပြီး မိုက်ကရိုဝေ့(ဖ်) မီးဖိုမှာ ချက်ပြုတ် တာဟာလည်းအလားတူ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ သူကပြောပါတယ် ။မြင့်မာတဲ့ အပူချိန်ကြောင့် ပလပ်စတစ်အပါးကနေ အဆိပ်တောက် တွေထွက်ပြီးအစားအစာထဲရောက်ရှိစေပါတယ် ။ စက္ကူပုဝါသုံးရင် ပိုကောင်းပါတယ် ။
ကျွန်တော်က ၁၉ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားတစ်ဦးပါ။ ကျွန်တော့်မှာ အရမ်းစိုးရိမ်နေတတ်တဲ့ ရောဂါရှိပါတယ်။ ဒီရောဂါ ကြောင့်လား မသိဘူး ညအိပ်လို့ရှိရင် ညတိုင်းလိုလို သုက်ထွက်နေပါတယ်။ အရမ်းကို စ်ိတ်ဆင်းရဲ နေရပါတယ်။ ဒီလို သုက်ထွက်တိုင်း ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ညစ်တာကို မထိန်းနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပါ သံသရာလည်နေပါတော့တယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာ နှစ်နှစ်လောက် ရှိနေပြီ။ သုက်က သာမန်လူလို အများကြီးလဲ မဟုတ်ဘူး။ နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏ ထွက်တတ်တယ်။ လိင်စိတ်တွေလည်း ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ Zavesca ဆေးက စိတ်မကျဆေး မဟုတ်ပါ။ ဘယ်ဆရာဝန်ကနေ ဘာအတွက် ညွှန်တာပါလဲ။ ဒီဆေးက Type 1 Gaucher disease ဆိုတဲ့ မျိုးရိုးပါ ရောဂါတမျိုးအတွက် သုံးရတယ်။ (အင်ဇိုင်းမ်) တမျိုး နည်းနေသူတွေကို ပေးပါတယ်။ ဒီရောဂါ ရှိနေသူဟာ ဆေးမကုဘဲနေရင် သွေးအားနည်းစေတတ်တယ်။ ဒီရောဂါအပြင် Zavesca ဆေးကို ရှာပါးတဲ့ အာရုံကြောရောဂါ အတွက်လဲ ပေးသေးတယ်။ Zavesca ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ထုံ-ကျင်တာ၊ လက်တုံတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သာမန်ဆိုးကျိုးတွေက ဝမ်းပျက်တာ၊ ဝမ်းချုပ်တာ၊ ခေါင်းနဲနဲမူးတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အစားပျက်တာ၊ လူပိန်လာတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျနေတာကို ပြင်ရပါမယ်။ ပြင်လို့လဲရပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ဆရာဝန်၊ စိတ်အထူးကုကို ပြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိတ်-အထူးကုဆရာဝန်ဆီ သွားရတာ ရှက်စရာလို့ ထင်နေကြတုံးဘဲ။ မမှန်ပါ။ နဲနဲလေးဖြစ်တာနဲ့ စိတ်-အထူးကု ဆရာဝန်ဆီ သွားသင့်ကြတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေ ငယ်တုံးအရွယ် အိမ်ထောင်လဲ မကျသေးချိန်မှာ အလိုလိုသုက်ထွက်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူတိုင်း လိုလိုလို့တောင် ပြောနိုင်တယ်။ အိပ်နေတုံး ထွက်မယ်။ တခါတလေ သုက်က နည်းချင်နည်းမယ်။ အများအားဖြင့် လိင်ကိစ္စ ပြီးစီးသွားသလိုမျိုး များတယ်။ လူငယ်တွေသာ မဟုတ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိသူ၊ လိင်ဆက်ဆံမှု ပုံမှန်ရှိသူတွေ မဆက်ဆံတာ ကြာသွားရင်လဲ အိပ်နေတုံးမှာ သုက်ထွက်တာ ဖြစ်တာပါဘဲ။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်နေကျလူဟာ မလုပ်တာကြာသွားရင်လဲ ဖြစ်မယ်။ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ ဆေးကုစရာ မလိုပါ။ အိပ်နေရင်း သုက်ထွက်တာကို Nocturnal emission လို့ခေါ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ သုက်ထွက်ပြီး၊ မိန်ကလေးတွေလဲ အိပ်ပျော်နေရင်း (ဗဂျိုင်းနား) စိုစွပ်လာတာကိုပါ ခေါ်တယ်။ Wet dream လို့ လွယ်လွယ် ခေါ်သေးတယ်။ အမှန်က Spontaneous orgasm အလိုအလျှောက် လိင်ကိစ္စပြီးသွားတာ ဖြစ်တယ်။ ငယ်သူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပေမဲ့ အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် အဖြစ်များသလဲ အတိအကျ ပြောမရပါ။ လေ့လာမှုတွေက အဖြေမတူတာတွေ ထွက်တယ်။ အမေရိကားမှာ - • ၈၃% ယောက်ျားတွေဟာ အိပ်နေတုံးမှာ သုက်ထွက်တာ ဖြစ်ဘူးကြတယ်။ • ၁၅ နှစ်သား ယောက်ျားလေးတွေမှာ ၇ ရက်တပါတ်မှာ ဝ့၃၆ ကြိမ်နှုန်းဖြစ်တယ်၊ • အသက် ၄ဝ ရှိသူ အိမ်ထောင် မရှိသူတွေမှာ ဝ့၁၈ ကြိမ်နှုန်းဖြစ်တယ်။ • ၁၉ နှစ်သား မိန်းမရှိသူတွေမှာ တပါတ်မှာ ဝ့၂၃ ကြိမ် နဲ့ • အသက် ၅ဝ အိမ်ထောင်သည်တွေမှာ ဝ့၁၅ ကြိမ် ဖြစ်ကြတယ်။ • တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ပိုနိုင်တယ်။ ဥပမာ အင်ဒိုနီးရှားမယ် ၂၄ နှစ်ရောက်သူတွေထဲက ၉၇% မှာ အဲလိုဖြစ်ကြတယ်။ နာမည်ကြီး လိင်-ဆေးပညာရှင် Alfred Kinsey က Masturbation (မာစတာဘေးရှင်း) နဲ့ Nocturnal dreams အိပ်ရင်း အိပ်မက်ဟာ အကြိမ်ရေ ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာ နည်းရင် ညသုက်ထွက်တာ များမယ်။ Testosterone-based drugs ယောက်ျား-ဟော်မုန်းဆေး သောက်ရင် အကြိမ်ပိုများနိုင်တယ်။ ၁၉၉၈ သုတေသနတခုအရ ဒီဆေး မသောက်သူတွေမှာ ၁၇% သာရှိပေမဲ့ ဟော်မုန်းဆေး များများ သောက်သူတွေမှာ ၉ဝ% အထိရှိတယ်။ လူပျိုပေါက် အရွယ်မှာ ယောက်ျားလေး ၁၃% က ပဌမဆုံး-သုက်လွှတ်တာကို ညအချိန်မှာ ဖြစ်ကြတယ်။ Nocturnal emissions အိပ်ရင်း သုက်ထွက်ခြင်းလို့ သတ်မှတ်ရာကနေ Nocturnal sex dreams အပြာ-အိပ်မက်လို့ ခေါ်လာတယ်။ Nocturnal orgasm အိပ်ရင်း ပြီးတာ လို့ဆိုရင် ပိုမှန်မယ်။ ဒါလဲ အကုန် မမှန်သေးဘူး။ ခဏတဖြုတ် နေ့ခင်း အိပ်နေရင်းလဲ ဖြစ်တတ်တာဘဲ။ Diurnal sex dreams နေ့အိပ်မက်လို့ ခေါ်ပြန်တယ်။ Orgasm during sleep အိပ်ရင်း-ပြီးတာလို့ ခြုံခေါ်တာက မလွဲတော့ဘူး။ • ခရစ်ယန်မှာ Saint Augustine က အိပ်နေတုံး သုက်လွှတ်တာဟာ Sin အပြစ် မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆတယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်သလို လူတယောက်ရဲ့ ဝိဥာဉ်ကို မညှိုးနွမ်းစေဘူး။ • Jewish ဂျူးအယူအဆကတော့ Mosaic Law of the Bible မှာ ယောက်ျားတယောက်ဟာ အိပ်နေတုံး သုက်လွှတ်တယ် ဆိုရင် တကိုယ်လုံးကို ရေနဲ့ မနက်ကနေ ညနေအထိ ဆေး-ချိုး သန့်ရှင်းပြစ်ရမယ်။ သုက်ပေတဲ့ အဝတ်အစားကိုလဲ အဲလိုလုပ်ရမယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ (ကင့်ပ်) ထဲမဝင်ရတာ၊ မြင့်မြတ်တဲ့အစာ မစားရတာမျိုး အထိ တားမြစ်ထားတယ်။ • ရှေးဟောင်း မွတ်ဆလင်တွေကလဲ ဘာသာရေးလုပ်ရင် သုက်ကို ဘယ်နည်းနဲ့ ထွက်ထွက် မသန့်ရှင်းဘူးလို့ ယူဆတယ်။ ရေချိုး သန့်စင်စေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညအချိန်မှာ သုက်အလိုလို သုက်ထွက်တာကို အကုသိုလ်လို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ • ဘာသာရေးတွေကနေ ယောက်ျားတွေကိုသာ အဲလို တားမြစ်မှု လုပ်ထားခဲ့ကြတာဟာ မိန်းမတွေမှာ (အီဂျက်ကူလေးရှင်း) မဖြစ်ဘူးလို့ ယူဆလို့ ဖြစ်မယ်။ လိင်-ဆေးပညာ ထွန်းကာလာမှ ဖြစ်တာနည်းပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေလဲ ပြီးရင် Female Ejaculation ပန်းထွက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သိလာကြတယ်။ Noctural emission ကို Spontaneous orgasm သူ့အလိုလို လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝတာလို့ သတ်မှတ်တယ်။ Psychological စိတ်ပိုင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ Fatigue အားကုန်တာ၊ Depression စိတ်ဓါတ်ကျတာ နဲ့ Stress စိတ်ဖိအားများတာတွေက အကြောင်းတရားတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ (ဟာဗယ်) မှာတော့ ကုသနည်းတွေ ရှိတယ်။ Ashwagandha or withania somnifera ခေါ်တယ်။ Indian ginseng, Ajagandha Winter cherry လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။ Peppermint oil ပင်စိမ်းဆီ ကိုလဲသုံးတယ်။ Pumpkin seed ဖရုံစေ့ ကိုလဲ သုံးတယ်။ အမှန်က ဒီဆေးတွေဟာ Aphrodisiac လိင်စိတ်-အားပေးဆေးမျိုး ဖြစ်တယ်။ • ယောက်ျားတွေမှာ သုက်လွှတ်တယ်ဆိုတာ လိင်စိတ်က အရင်ဖြစ်ရမယ်၊ စိတ်ထက်သန်လာမယ်၊ လိင်မှုကိစ္စ တခုခုလုပ်မယ်၊ နောက်ဆုံး ကျေနပ်အားရတော့မှ သုက်လွှတ်တယ်။ ညအချိန်လွှတ်တာက အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ လိင်စိတ်က အိပ်မက်ထဲမှာ ပေါ်နိုင်ပေမဲ့ လိင်အင်္ဂါ မသန်မာဘဲလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ • မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင် (အော်ဂဇင်) ရဘို့ အချိန်ကြာတတ်ပေမဲ့ အိပ်ပျော်နေတုံးဆိုရင် ပိုမြန်ကြတယ်။ • ပညာပိုသင်ထားသူတွေမျာ ပိုများတာ တွေ့ရတယ်။ • Nocturnal Emissions ဆိုတဲ့ တေးဂီတအဖွဲ့ ရှိတယ်။ Wet Dream နာမည်နဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို အမေရိကား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အီရန်၊ ယူကေ၊ စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ရိုက်တယ်။ • Masturbation လုပ်ပေးရင် သက်သာတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝ မဖြစ်တော့မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ • Extreme stress စိတ်ဖိစီးမှုများတာကို မသိစိတ်ကနေ လျှော့ဖြေပေးတာလို့ တချို့က ယူဆတယ်။ • Sexually deviant လိင်စိတ် မမှန်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ • Gay or straight အဖြောင့်သွားသူ၊ ဂေးဖြစ်သူ မကွဲပြားဘူး၊ အတူဘဲ။ • Wet Dream Experiences ဆိုပြီး ပဌမဆုံး အိပ်နေရင် သုက်ထွက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ကြသူတွေလဲ ရှိတယ်။ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ကျွန်တော် ညအိပ်တဲ့အချိန် သုက်ထွက်တာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ လိင်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်နဲ့ရော စိတ်ရောဂါဆရာဝန်တွေနဲ့ပါ ပြသပြီးသွားပါပြီး။ တစ်ကိုယ်လုံးလဲစစ်ပြီးပါပြီး။ ဘာရောဂါမှမရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ပထမအိပ်ဆေးတွေနဲ့ အားဆေးတွေပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်ဆေးသောက်လဲထွက်တာပါပဲ။ အကြိမ်တော့ နည်းနည်းလျှော့သွားပေမယ့် ဆေးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ပြန်များလာပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဆရာဝန်တွေက Masterbation သုံးရက်တစ်ကြိမ် လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်နေတော့ စစချင်းမထွက်ပေမယ့်နောက်နားတဲ့ရက်မှာ အိပ်စဉ်သုတ်ပြန်ထွက်ပါတယ်။ အဲ့လိုထွက်ပြီးရင် ပိုလို့တောင် မထူနိုင်မထနိုင်ဖြစ်ရပါတယ်။ နောက် Masterbation နဲ့ အိပ်တဲ့အချိန်သုတ်ထွက်တာနဲ့က မတူပါဘူး။ အိပ်တဲ့အချိန်သုတ်ထွက်တာက ကျွန်တော့်အတွက် အရမ်းကို စိတ်ကျပြီး မနက်ကျရင်မထနိုင်သလို ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို ညဘက်သုံးရက်တစ်ကြိမ်လောက်ထွက်တာ ၅ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ဆရာဝန်တွေက နောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားမှာသွား ခွဲစိတ်မှရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို စဉ်းစားပေးပါအုံးဆရာ။ အိပ်နေတုံးမှာ ယောက်ျားလေး၊ ယောက်ျားကြီးတွေ သုက်အလိုလိုလို ထွက်တာကို Sexual dreams အိပ်မက်ပြာ၊ Wet dream အိပ်မက်အတွင်းစွပ်စိုခြင်း၊ Nocturnal emission အကာလမှာ သုက်ထွက်တာစသဖြင့် ခေါ်တယ်။ အိပ်မက်ဆိုတဲ့သဘောက Intense activity တခုခုလုပ်ခြင်ဇောကြီးလို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယေဘုယျပြောနိုင်တယ်။ အိပ်မက်တိုင်းက အဲလိုမျိုး အမြဲတန်းမှန်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ Subconscious minds မသိစိတ်မှာ ကိန်းအောင်းနေတာလို့ ယူဆချက်လဲရှိတယ်။ သိစိတ်ကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို (ဆင်ဆာ) မလုပ်နိုင်ပါဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့ လုပ်နိုင်တယ်အယူအဆမှာ မတူတာ ရှိပါတယ်။ အတိတ်နိမိတ်ကောက်ကြတာကလဲ အရပ်စကား လူပြောများတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပိုပိုပြီးပွင့်လင်းမှုရှိလာတဲ့ အခုခေတ်အခြေအနေမှာတောင်မှ လူ့စိတ်သဘာဝကို ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုက မကျော်နိုင်ပါ။ ငါ့ဘာမှဖုံးစရာမလိုဘူးလို့ ယူဆသူတွေဟာ တကယ်တော့ စိုးရိမ်သောက ရှိနေတာ သူကိုယ်တိုင်မသိပါ။ လိင်စိတ်ဆိုတာ Human drives လူ့စိတ်စေ့ဆော်မှုတွေထဲမှာ အင်အားအကြီးဆုံးလို့ မှတ်ယူတာမို့ အိပ်မက်ထဲမှာ ပါတာ သဘာဝကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လိင်အိပ်မက်ကို ယောက်ျား၊ မိန်းမ မက်ကြပါတယ်။ Dr. David Delvin နဲ့ Christine Webber တို့တွဲရေးခဲ့တဲ့ The Big 'O' - Understanding and Improving Your Orgasm and Your Partner's စာအုပ်ထဲမှာ မိန်းမတွေမှာ Orgasms လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝတဲ့အထိ မရောက်ကြဘူးလို့ပါခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ စာရေးသူတွေဆီကို တုံ့ပြန်စာရေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး (အော်ဂဇင်) ကို အိပ်မက်မက်ရင်း ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Dr Alfred Kinsey ရဲ့ သုတေသနအရ ၂၁ နှစ်ကနေ ၂၅ နှစ်ကြား ယောက်ျားတွေမှာ ၇ဝ% ကျော်မှာ အိပ်မက်ထဲမှာ လိင်နဲ့ဆိုင်တာမက်ပြီး သုက်လွှတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသက်ရလာရင် နည်းလာတယ်။ လုံးဝ မဖြစ်တော့တာလဲ မဟုတ်ပြန်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက ယောက်ျားလေးတချို့မှာ အဲလိုဖြစ်နေလို့ စိတ်ရတ်သူ၊စိတ်ပျက်သူ၊ စိတ်ထခိုက်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ဒီ (ဘလော့ခ်) အမေးအဖြေတွေအရ သိရပါတယ်။ ဖါသိဖါသာနေသူတွေက မေးစရာလို့ထင်ကြပါ။ သူတို့လိုနေတတ်တာ မှန်ပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းမဟုတ်တာ ရေးပါရစေ။ အဲလိုဖြစ်နေတာကို ပျောက်စေဆိုတဲ့ဆေး မရှိသေးပါ။ ဆောရီး။ ညဝတ် အဝတ်အစားတွေ ပေကျံနေလို့ စိတ်ပျက်တယ်ဆိုသူကို မညှာမတာပြောတဲ့ ဆရာဝန်ကတော့ အတွင်းခံ တိုတိုလေးသာဝတ်ပါလို့ဆိုပါတယ်။ အားငယ်စရာကို ပြောပြီးနောက် ဒီလိုဖြစ်နေလို့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စရာမရှိပါဆိုတာ ပြောပါရစေ။ အာရှတိုက်က ယောက်ျားလေးတွေက ပိုးရိမ်တတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အားနည်းသွားတယ်လို့ ထင်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းချင်းလဲ အဲလိုပြောလေ့ရှိကြတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာသုတ ဖြန့်တာတွေက နည်းတာရော၊ မထိရောက်တာရော၊ မမှန်တာတွေရောကြောင့် အထင်မှား၊ အပြောမှား၊ အလုပ်မှားနေကြတာ စိတ်မကောင်းပါ။ ယောက်ျားတယောက် သုက်ရည်ထွက်ရင် ချက်ချင်း ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ချင်အောင် ပုံကျသွားတယ်။ တခါတည်း ဘာကလေးတခုမှတောင် တွေးမနေချင်အောင် လူအလုပ်-စိတ်အလုပ်မှန်သမျှ နားလိုက်ချင်တော့တယ်။ အားအင်မှန်သမျှ တစက်ကလေးမှ မကျန်အောင် ကုန်ခမ်းသွားသလိုနဲ့တူတယ်။ အဲ့့ ဒီလိုမမြဲမဖြစ်ပါ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲလိုအချိန်မှာ ထပြေးစရာ၊ ခုန်ချစရာ စတာမျိုးကြုံလာရင် ထပြေးနိုင်၊ ခုန်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့့ မနားရရင်တော့ နားဘို့လိုပါတယ်။ နားလိုက်ရင်လဲ အားပြန်ပြည့်ပါတယ်။ ဆေးသိပ္ပံနည်းကျပြောရရင် ဒီလို အလိုလိုသုက်လွှတ်ခြင်းဟာ Body's natural response to its hormones ဟော်မုန်းဓါတ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အလိအလျှောက်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်တာသာဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ လစဉ်ရာသီဆင်းသလိုသဘောနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ အိပ်နေချိန်မှာ သုက်လွှတ်တာကြောင့် (၁) ကျန်းမာရေးနဲ့ (၃) နောင်တချိန်မှာ သားသမီးရနိုင်ရေး မထိခိုက်ပါ။ ဘာသာရေးကနေ လိင်မှုဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာ အယူအဆတွေ မတူကြပါ။ မွတ်ဆလင်အဆုံးအမမှာ ဒီလိုဖြစ်တာကို Satan ကလုပ်တာ အကုသိုလ်ပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ • တချို့က သဘောကျပြီး ရယ်ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ • Kegel exercises (ကီဂယ်လ်) လေ့ကျင့်ခန်း နေ့စဉ်လုပ်ပါ။ • Antidepressants စိကျရောဂါဆေးကနေ ကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ • တကယ်လို့ အဲလိုဖြစ်နေတာကို ရောဂါကြီးလို့ ထင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးပြောလဲ စွဲထင်နေသူတွေကတော့ စိတ်အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ရပါမယ်။ Therapists စိတ်ကုရာဝန်၊ Hypnotherapists အိပ်မွေ့ချဆရာဝန်တွေ ကုသပေးနည်းတွေက မတူကြပါ။ • အိက်မက်ထဲမှာ ကိုယ်ချစ်ခင်စွဲမက်သူတွေကို မက်ရာကနေဖြစ်တာကို Dreams of love လို့ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါမှ မတခါဘူးသူတယောက်ယောက်ကို အိပ်မက်ထဲလာပေါ်တာမျိုးလဲရှိပါတယ်။ လိုအပ်ရင် Relationship therapist ကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုရပါမယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်ပျော်ရွင်ပါစေ.....
Original from: http://nyeinchanthu3.blogspot.com/2013/11/wet-dream-2.html
ကျွန်တော်က ၁၉ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားတစ်ဦးပါ။ ကျွန်တော့်မှာ အရမ်းစိုးရိမ်နေတတ်တဲ့ ရောဂါရှိပါတယ်။ ဒီရောဂါ ကြောင့်လား မသိဘူး ညအိပ်လို့ရှိရင် ညတိုင်းလိုလို သုက်ထွက်နေပါတယ်။ အရမ်းကို စ်ိတ်ဆင်းရဲ နေရပါတယ်။ ဒီလို သုက်ထွက်တိုင်း ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ညစ်တာကို မထိန်းနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပါ သံသရာလည်နေပါတော့တယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာ နှစ်နှစ်လောက် ရှိနေပြီ။ သုက်က သာမန်လူလို အများကြီးလဲ မဟုတ်ဘူး။ နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏ ထွက်တတ်တယ်။ လိင်စိတ်တွေလည်း ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ Zavesca ဆေးက စိတ်မကျဆေး မဟုတ်ပါ။ ဘယ်ဆရာဝန်ကနေ ဘာအတွက် ညွှန်တာပါလဲ။ ဒီဆေးက Type 1 Gaucher disease ဆိုတဲ့ မျိုးရိုးပါ ရောဂါတမျိုးအတွက် သုံးရတယ်။ (အင်ဇိုင်းမ်) တမျိုး နည်းနေသူတွေကို ပေးပါတယ်။ ဒီရောဂါ ရှိနေသူဟာ ဆေးမကုဘဲနေရင် သွေးအားနည်းစေတတ်တယ်။ ဒီရောဂါအပြင် Zavesca ဆေးကို ရှာပါးတဲ့ အာရုံကြောရောဂါ အတွက်လဲ ပေးသေးတယ်။ Zavesca ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ထုံ-ကျင်တာ၊ လက်တုံတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သာမန်ဆိုးကျိုးတွေက ဝမ်းပျက်တာ၊ ဝမ်းချုပ်တာ၊ ခေါင်းနဲနဲမူးတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အစားပျက်တာ၊ လူပိန်လာတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျနေတာကို ပြင်ရပါမယ်။ ပြင်လို့လဲရပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ဆရာဝန်၊ စိတ်အထူးကုကို ပြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိတ်-အထူးကုဆရာဝန်ဆီ သွားရတာ ရှက်စရာလို့ ထင်နေကြတုံးဘဲ။ မမှန်ပါ။ နဲနဲလေးဖြစ်တာနဲ့ စိတ်-အထူးကု ဆရာဝန်ဆီ သွားသင့်ကြတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေ ငယ်တုံးအရွယ် အိမ်ထောင်လဲ မကျသေးချိန်မှာ အလိုလိုသုက်ထွက်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူတိုင်း လိုလိုလို့တောင် ပြောနိုင်တယ်။ အိပ်နေတုံး ထွက်မယ်။ တခါတလေ သုက်က နည်းချင်နည်းမယ်။ အများအားဖြင့် လိင်ကိစ္စ ပြီးစီးသွားသလိုမျိုး များတယ်။ လူငယ်တွေသာ မဟုတ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိသူ၊ လိင်ဆက်ဆံမှု ပုံမှန်ရှိသူတွေ မဆက်ဆံတာ ကြာသွားရင်လဲ အိပ်နေတုံးမှာ သုက်ထွက်တာ ဖြစ်တာပါဘဲ။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်နေကျလူဟာ မလုပ်တာကြာသွားရင်လဲ ဖြစ်မယ်။ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ ဆေးကုစရာ မလိုပါ။ အိပ်နေရင်း သုက်ထွက်တာကို Nocturnal emission လို့ခေါ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ သုက်ထွက်ပြီး၊ မိန်ကလေးတွေလဲ အိပ်ပျော်နေရင်း (ဗဂျိုင်းနား) စိုစွပ်လာတာကိုပါ ခေါ်တယ်။ Wet dream လို့ လွယ်လွယ် ခေါ်သေးတယ်။ အမှန်က Spontaneous orgasm အလိုအလျှောက် လိင်ကိစ္စပြီးသွားတာ ဖြစ်တယ်။ ငယ်သူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပေမဲ့ အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် အဖြစ်များသလဲ အတိအကျ ပြောမရပါ။ လေ့လာမှုတွေက အဖြေမတူတာတွေ ထွက်တယ်။ အမေရိကားမှာ - • ၈၃% ယောက်ျားတွေဟာ အိပ်နေတုံးမှာ သုက်ထွက်တာ ဖြစ်ဘူးကြတယ်။ • ၁၅ နှစ်သား ယောက်ျားလေးတွေမှာ ၇ ရက်တပါတ်မှာ ဝ့၃၆ ကြိမ်နှုန်းဖြစ်တယ်၊ • အသက် ၄ဝ ရှိသူ အိမ်ထောင် မရှိသူတွေမှာ ဝ့၁၈ ကြိမ်နှုန်းဖြစ်တယ်။ • ၁၉ နှစ်သား မိန်းမရှိသူတွေမှာ တပါတ်မှာ ဝ့၂၃ ကြိမ် နဲ့ • အသက် ၅ဝ အိမ်ထောင်သည်တွေမှာ ဝ့၁၅ ကြိမ် ဖြစ်ကြတယ်။ • တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ပိုနိုင်တယ်။ ဥပမာ အင်ဒိုနီးရှားမယ် ၂၄ နှစ်ရောက်သူတွေထဲက ၉၇% မှာ အဲလိုဖြစ်ကြတယ်။ နာမည်ကြီး လိင်-ဆေးပညာရှင် Alfred Kinsey က Masturbation (မာစတာဘေးရှင်း) နဲ့ Nocturnal dreams အိပ်ရင်း အိပ်မက်ဟာ အကြိမ်ရေ ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာ နည်းရင် ညသုက်ထွက်တာ များမယ်။ Testosterone-based drugs ယောက်ျား-ဟော်မုန်းဆေး သောက်ရင် အကြိမ်ပိုများနိုင်တယ်။ ၁၉၉၈ သုတေသနတခုအရ ဒီဆေး မသောက်သူတွေမှာ ၁၇% သာရှိပေမဲ့ ဟော်မုန်းဆေး များများ သောက်သူတွေမှာ ၉ဝ% အထိရှိတယ်။ လူပျိုပေါက် အရွယ်မှာ ယောက်ျားလေး ၁၃% က ပဌမဆုံး-သုက်လွှတ်တာကို ညအချိန်မှာ ဖြစ်ကြတယ်။ Nocturnal emissions အိပ်ရင်း သုက်ထွက်ခြင်းလို့ သတ်မှတ်ရာကနေ Nocturnal sex dreams အပြာ-အိပ်မက်လို့ ခေါ်လာတယ်။ Nocturnal orgasm အိပ်ရင်း ပြီးတာ လို့ဆိုရင် ပိုမှန်မယ်။ ဒါလဲ အကုန် မမှန်သေးဘူး။ ခဏတဖြုတ် နေ့ခင်း အိပ်နေရင်းလဲ ဖြစ်တတ်တာဘဲ။ Diurnal sex dreams နေ့အိပ်မက်လို့ ခေါ်ပြန်တယ်။ Orgasm during sleep အိပ်ရင်း-ပြီးတာလို့ ခြုံခေါ်တာက မလွဲတော့ဘူး။ • ခရစ်ယန်မှာ Saint Augustine က အိပ်နေတုံး သုက်လွှတ်တာဟာ Sin အပြစ် မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆတယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်သလို လူတယောက်ရဲ့ ဝိဥာဉ်ကို မညှိုးနွမ်းစေဘူး။ • Jewish ဂျူးအယူအဆကတော့ Mosaic Law of the Bible မှာ ယောက်ျားတယောက်ဟာ အိပ်နေတုံး သုက်လွှတ်တယ် ဆိုရင် တကိုယ်လုံးကို ရေနဲ့ မနက်ကနေ ညနေအထိ ဆေး-ချိုး သန့်ရှင်းပြစ်ရမယ်။ သုက်ပေတဲ့ အဝတ်အစားကိုလဲ အဲလိုလုပ်ရမယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ (ကင့်ပ်) ထဲမဝင်ရတာ၊ မြင့်မြတ်တဲ့အစာ မစားရတာမျိုး အထိ တားမြစ်ထားတယ်။ • ရှေးဟောင်း မွတ်ဆလင်တွေကလဲ ဘာသာရေးလုပ်ရင် သုက်ကို ဘယ်နည်းနဲ့ ထွက်ထွက် မသန့်ရှင်းဘူးလို့ ယူဆတယ်။ ရေချိုး သန့်စင်စေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညအချိန်မှာ သုက်အလိုလို သုက်ထွက်တာကို အကုသိုလ်လို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ • ဘာသာရေးတွေကနေ ယောက်ျားတွေကိုသာ အဲလို တားမြစ်မှု လုပ်ထားခဲ့ကြတာဟာ မိန်းမတွေမှာ (အီဂျက်ကူလေးရှင်း) မဖြစ်ဘူးလို့ ယူဆလို့ ဖြစ်မယ်။ လိင်-ဆေးပညာ ထွန်းကာလာမှ ဖြစ်တာနည်းပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေလဲ ပြီးရင် Female Ejaculation ပန်းထွက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သိလာကြတယ်။ Noctural emission ကို Spontaneous orgasm သူ့အလိုလို လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝတာလို့ သတ်မှတ်တယ်။ Psychological စိတ်ပိုင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ Fatigue အားကုန်တာ၊ Depression စိတ်ဓါတ်ကျတာ နဲ့ Stress စိတ်ဖိအားများတာတွေက အကြောင်းတရားတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ (ဟာဗယ်) မှာတော့ ကုသနည်းတွေ ရှိတယ်။ Ashwagandha or withania somnifera ခေါ်တယ်။ Indian ginseng, Ajagandha Winter cherry လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။ Peppermint oil ပင်စိမ်းဆီ ကိုလဲသုံးတယ်။ Pumpkin seed ဖရုံစေ့ ကိုလဲ သုံးတယ်။ အမှန်က ဒီဆေးတွေဟာ Aphrodisiac လိင်စိတ်-အားပေးဆေးမျိုး ဖြစ်တယ်။ • ယောက်ျားတွေမှာ သုက်လွှတ်တယ်ဆိုတာ လိင်စိတ်က အရင်ဖြစ်ရမယ်၊ စိတ်ထက်သန်လာမယ်၊ လိင်မှုကိစ္စ တခုခုလုပ်မယ်၊ နောက်ဆုံး ကျေနပ်အားရတော့မှ သုက်လွှတ်တယ်။ ညအချိန်လွှတ်တာက အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ လိင်စိတ်က အိပ်မက်ထဲမှာ ပေါ်နိုင်ပေမဲ့ လိင်အင်္ဂါ မသန်မာဘဲလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ • မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင် (အော်ဂဇင်) ရဘို့ အချိန်ကြာတတ်ပေမဲ့ အိပ်ပျော်နေတုံးဆိုရင် ပိုမြန်ကြတယ်။ • ပညာပိုသင်ထားသူတွေမျာ ပိုများတာ တွေ့ရတယ်။ • Nocturnal Emissions ဆိုတဲ့ တေးဂီတအဖွဲ့ ရှိတယ်။ Wet Dream နာမည်နဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို အမေရိကား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အီရန်၊ ယူကေ၊ စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ရိုက်တယ်။ • Masturbation လုပ်ပေးရင် သက်သာတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝ မဖြစ်တော့မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ • Extreme stress စိတ်ဖိစီးမှုများတာကို မသိစိတ်ကနေ လျှော့ဖြေပေးတာလို့ တချို့က ယူဆတယ်။ • Sexually deviant လိင်စိတ် မမှန်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ • Gay or straight အဖြောင့်သွားသူ၊ ဂေးဖြစ်သူ မကွဲပြားဘူး၊ အတူဘဲ။ • Wet Dream Experiences ဆိုပြီး ပဌမဆုံး အိပ်နေရင် သုက်ထွက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ကြသူတွေလဲ ရှိတယ်။ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ကျွန်တော် ညအိပ်တဲ့အချိန် သုက်ထွက်တာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ လိင်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်နဲ့ရော စိတ်ရောဂါဆရာဝန်တွေနဲ့ပါ ပြသပြီးသွားပါပြီး။ တစ်ကိုယ်လုံးလဲစစ်ပြီးပါပြီး။ ဘာရောဂါမှမရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ပထမအိပ်ဆေးတွေနဲ့ အားဆေးတွေပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်ဆေးသောက်လဲထွက်တာပါပဲ။ အကြိမ်တော့ နည်းနည်းလျှော့သွားပေမယ့် ဆေးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ပြန်များလာပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဆရာဝန်တွေက Masterbation သုံးရက်တစ်ကြိမ် လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်နေတော့ စစချင်းမထွက်ပေမယ့်နောက်နားတဲ့ရက်မှာ အိပ်စဉ်သုတ်ပြန်ထွက်ပါတယ်။ အဲ့လိုထွက်ပြီးရင် ပိုလို့တောင် မထူနိုင်မထနိုင်ဖြစ်ရပါတယ်။ နောက် Masterbation နဲ့ အိပ်တဲ့အချိန်သုတ်ထွက်တာနဲ့က မတူပါဘူး။ အိပ်တဲ့အချိန်သုတ်ထွက်တာက ကျွန်တော့်အတွက် အရမ်းကို စိတ်ကျပြီး မနက်ကျရင်မထနိုင်သလို ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို ညဘက်သုံးရက်တစ်ကြိမ်လောက်ထွက်တာ ၅ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ဆရာဝန်တွေက နောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားမှာသွား ခွဲစိတ်မှရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို စဉ်းစားပေးပါအုံးဆရာ။ အိပ်နေတုံးမှာ ယောက်ျားလေး၊ ယောက်ျားကြီးတွေ သုက်အလိုလိုလို ထွက်တာကို Sexual dreams အိပ်မက်ပြာ၊ Wet dream အိပ်မက်အတွင်းစွပ်စိုခြင်း၊ Nocturnal emission အကာလမှာ သုက်ထွက်တာစသဖြင့် ခေါ်တယ်။ အိပ်မက်ဆိုတဲ့သဘောက Intense activity တခုခုလုပ်ခြင်ဇောကြီးလို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယေဘုယျပြောနိုင်တယ်။ အိပ်မက်တိုင်းက အဲလိုမျိုး အမြဲတန်းမှန်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ Subconscious minds မသိစိတ်မှာ ကိန်းအောင်းနေတာလို့ ယူဆချက်လဲရှိတယ်။ သိစိတ်ကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို (ဆင်ဆာ) မလုပ်နိုင်ပါဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့ လုပ်နိုင်တယ်အယူအဆမှာ မတူတာ ရှိပါတယ်။ အတိတ်နိမိတ်ကောက်ကြတာကလဲ အရပ်စကား လူပြောများတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပိုပိုပြီးပွင့်လင်းမှုရှိလာတဲ့ အခုခေတ်အခြေအနေမှာတောင်မှ လူ့စိတ်သဘာဝကို ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုက မကျော်နိုင်ပါ။ ငါ့ဘာမှဖုံးစရာမလိုဘူးလို့ ယူဆသူတွေဟာ တကယ်တော့ စိုးရိမ်သောက ရှိနေတာ သူကိုယ်တိုင်မသိပါ။ လိင်စိတ်ဆိုတာ Human drives လူ့စိတ်စေ့ဆော်မှုတွေထဲမှာ အင်အားအကြီးဆုံးလို့ မှတ်ယူတာမို့ အိပ်မက်ထဲမှာ ပါတာ သဘာဝကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လိင်အိပ်မက်ကို ယောက်ျား၊ မိန်းမ မက်ကြပါတယ်။ Dr. David Delvin နဲ့ Christine Webber တို့တွဲရေးခဲ့တဲ့ The Big 'O' - Understanding and Improving Your Orgasm and Your Partner's စာအုပ်ထဲမှာ မိန်းမတွေမှာ Orgasms လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝတဲ့အထိ မရောက်ကြဘူးလို့ပါခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ စာရေးသူတွေဆီကို တုံ့ပြန်စာရေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး (အော်ဂဇင်) ကို အိပ်မက်မက်ရင်း ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Dr Alfred Kinsey ရဲ့ သုတေသနအရ ၂၁ နှစ်ကနေ ၂၅ နှစ်ကြား ယောက်ျားတွေမှာ ၇ဝ% ကျော်မှာ အိပ်မက်ထဲမှာ လိင်နဲ့ဆိုင်တာမက်ပြီး သုက်လွှတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသက်ရလာရင် နည်းလာတယ်။ လုံးဝ မဖြစ်တော့တာလဲ မဟုတ်ပြန်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက ယောက်ျားလေးတချို့မှာ အဲလိုဖြစ်နေလို့ စိတ်ရတ်သူ၊စိတ်ပျက်သူ၊ စိတ်ထခိုက်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ဒီ (ဘလော့ခ်) အမေးအဖြေတွေအရ သိရပါတယ်။ ဖါသိဖါသာနေသူတွေက မေးစရာလို့ထင်ကြပါ။ သူတို့လိုနေတတ်တာ မှန်ပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းမဟုတ်တာ ရေးပါရစေ။ အဲလိုဖြစ်နေတာကို ပျောက်စေဆိုတဲ့ဆေး မရှိသေးပါ။ ဆောရီး။ ညဝတ် အဝတ်အစားတွေ ပေကျံနေလို့ စိတ်ပျက်တယ်ဆိုသူကို မညှာမတာပြောတဲ့ ဆရာဝန်ကတော့ အတွင်းခံ တိုတိုလေးသာဝတ်ပါလို့ဆိုပါတယ်။ အားငယ်စရာကို ပြောပြီးနောက် ဒီလိုဖြစ်နေလို့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စရာမရှိပါဆိုတာ ပြောပါရစေ။ အာရှတိုက်က ယောက်ျားလေးတွေက ပိုးရိမ်တတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အားနည်းသွားတယ်လို့ ထင်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းချင်းလဲ အဲလိုပြောလေ့ရှိကြတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာသုတ ဖြန့်တာတွေက နည်းတာရော၊ မထိရောက်တာရော၊ မမှန်တာတွေရောကြောင့် အထင်မှား၊ အပြောမှား၊ အလုပ်မှားနေကြတာ စိတ်မကောင်းပါ။ ယောက်ျားတယောက် သုက်ရည်ထွက်ရင် ချက်ချင်း ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ချင်အောင် ပုံကျသွားတယ်။ တခါတည်း ဘာကလေးတခုမှတောင် တွေးမနေချင်အောင် လူအလုပ်-စိတ်အလုပ်မှန်သမျှ နားလိုက်ချင်တော့တယ်။ အားအင်မှန်သမျှ တစက်ကလေးမှ မကျန်အောင် ကုန်ခမ်းသွားသလိုနဲ့တူတယ်။ အဲ့့ ဒီလိုမမြဲမဖြစ်ပါ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲလိုအချိန်မှာ ထပြေးစရာ၊ ခုန်ချစရာ စတာမျိုးကြုံလာရင် ထပြေးနိုင်၊ ခုန်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့့ မနားရရင်တော့ နားဘို့လိုပါတယ်။ နားလိုက်ရင်လဲ အားပြန်ပြည့်ပါတယ်။ ဆေးသိပ္ပံနည်းကျပြောရရင် ဒီလို အလိုလိုသုက်လွှတ်ခြင်းဟာ Body's natural response to its hormones ဟော်မုန်းဓါတ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အလိအလျှောက်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်တာသာဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ လစဉ်ရာသီဆင်းသလိုသဘောနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ အိပ်နေချိန်မှာ သုက်လွှတ်တာကြောင့် (၁) ကျန်းမာရေးနဲ့ (၃) နောင်တချိန်မှာ သားသမီးရနိုင်ရေး မထိခိုက်ပါ။ ဘာသာရေးကနေ လိင်မှုဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာ အယူအဆတွေ မတူကြပါ။ မွတ်ဆလင်အဆုံးအမမှာ ဒီလိုဖြစ်တာကို Satan ကလုပ်တာ အကုသိုလ်ပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ • တချို့က သဘောကျပြီး ရယ်ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ • Kegel exercises (ကီဂယ်လ်) လေ့ကျင့်ခန်း နေ့စဉ်လုပ်ပါ။ • Antidepressants စိကျရောဂါဆေးကနေ ကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ • တကယ်လို့ အဲလိုဖြစ်နေတာကို ရောဂါကြီးလို့ ထင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးပြောလဲ စွဲထင်နေသူတွေကတော့ စိတ်အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ရပါမယ်။ Therapists စိတ်ကုရာဝန်၊ Hypnotherapists အိပ်မွေ့ချဆရာဝန်တွေ ကုသပေးနည်းတွေက မတူကြပါ။ • အိက်မက်ထဲမှာ ကိုယ်ချစ်ခင်စွဲမက်သူတွေကို မက်ရာကနေဖြစ်တာကို Dreams of love လို့ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါမှ မတခါဘူးသူတယောက်ယောက်ကို အိပ်မက်ထဲလာပေါ်တာမျိုးလဲရှိပါတယ်။ လိုအပ်ရင် Relationship therapist ကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုရပါမယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ